रिसाइन् आशा गुरूङः भनिन्- मलाई पदबाट हटाउने दिनेश गुरूङ को हुन्? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsरिसाइन् आशा गुरूङः भनिन्- मलाई पदबाट हटाउने दिनेश गुरूङ को हुन्?
रिसाइन् आशा गुरूङः भनिन्- मलाई पदबाट हटाउने दिनेश गुरूङ को हुन्?
November 14, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कोर कमिटी प्रमुख आशा गुरूङले आज वाट्सएपको माध्यमबाट एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गोजमुमो कोर कमिटी सदस्य दिनेश गुरूङमाथि कटाक्ष प्रहार गरेका छन्। उनले भनेकी छन्-मलाई नारी मोर्चा कोर कमिटी प्रमुखको पदबाट हटाउने दिनेश गुरूङको कुनै अधिकार छैन।
किनभने, दिनेश गुरूङहरू पक्का तृणमूल कंग्रेसका समर्थकहरू हुन्। जसले गोर्खाल्यान्ड नदिने पार्टीलाई साथ दिएर आफूहरू गोजमुमोका समर्थक हुँ भन्ने बताइरहेका छन्। म-सँगै अन्य6जना नारी मोर्चा सदस्यालाई सिंहमारीस्थित गोजमुमोको पार्टी कार्यालयमा 12 दिसम्बर 2009-को दिन नारी मोर्चा कोर कमिटी सदस्या बनाइएको हो, जुन बैठकमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङका साथै गोजमुमो केन्द्रिय समितिका अन्य शीर्ष पदाधिकारीवर्ग पनि उपस्थित थिए।
त्यसै बैठकमा मलाई नारी मोर्चा कोर कमिटी प्रमुखको पद प्रदान गरियो भने त्यसै बैठकमा हामीलाई डुवर्स चलो अभियान गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। त्य्सपछि हामी डुवर्सका साथै देशका विभिन्न गोर्खावहुल इलाकामा गएर पार्टी विस्तारको काम गरेका थियौं। तर अहिले आएर आशा गुरूङलाई कसले नारी मोर्चा प्रमुख बनायो, कसैलाई थाह छैन भन्ने दिनेश गुरूङले आफ्नो अतित पनि भुल्नु हुँदैन।
दिनेश गुरूङ पार्टीबाट निष्कासित नेता हुन्, उनलाई गोर्खाल्यान्डका साँचो समर्थक विरूद्ध लाञ्छना लगाउने कुनै अधिकार छैन। पुलिसको आड़मा कति दिन राजनीति गर्ने? भन्ने प्रश्‍न गर्दै आशा गुरूङले अझै भनेकी छन्-हामी बंगालअघि घुँड़ा टेक्ने होइनौं, न कहिले टेक्नेनैछौं। म हिजो पनि नारी मोर्चा कोर कमिटी प्रमुख थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहनेछु, उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्।
स्मरण गराइन्छ, गत केही दिनअघि दार्जीलिङ शहरमा नारी मोर्चा केन्द्रिय समितिको कार्यालय उद्घाटन गर्ने क्रममा विनयपन्थी गोजमुमो कोर कमिटी सदस्य दिनेश गुरूङले आशा गुरूङलाई नारी मोर्चाबाटै हटाउने बताउँदै उनलाई कसले नारी मोर्चा कोर कमिटी प्रमुख बनायो, कसैलाई थाहनै नभएको बयान दिएका थिए।
युवा मोर्चा टाउन कमिटीः विमलपन्थी विघटनः विनयपन्थी गठन
गोरामुमो प्रतिनिधिहरूले भेट्यो खण्ड विकास अधिकारीः गऱ्यो एघाह्रवटा माग